The Mobile World Congress 2021 na Barcelona ga-abụ oge okpomọkụ a ma nwee enyemaka ihu na ihu | Gam akporosis
GSMA enyela nkọwa banyere ijide otu ihe omume kachasị mkpa na mpaghara telephony, Mobile World Congress. Ihe omume a ga - eme na Barcelona na 2021 a n’oge ọkọchịHapụ ọnwa Febụwarị ma ewepụtara ya: aga-enweta enyemaka ndị mgbasa ozi.
The Mobile World Congress 2021 na Barcelona ga-eme site na June 28 ruo July 1, ndị bịaranụ agaghị eru 110.000 nke afọ ndị gara aga, mana ọ ga-abụ n'onwe. Ọ ga-abụ otu n'ime ihe mbụ buru ibu nke ọha na eze na ndị mgbasa ozi ga-abịa, nnukwu nzọụkwụ mgbe ịkagbuchara Mobile World Congress 2020.
1 Ihe atụ maka ndị bịara ya
2 Ihe omume na ọkara ikike
3 A na-atụ anya ihe omume nwere nnukwu ụdị
Ihe atụ maka ndị bịara ya
The Mobile World Congress na Shanghai ga-abụ otu n'ime ihe omume mbụ ndị ọha na eze na ndị mgbasa ozi ga-abịaAnya niile ga-adị ebe ahụ tupu mmemme Barcelona amalite. Ndị bịara afọ a ga-abụ 30 ruo 40%, ihe dịka 20.000 nke 60.000 na 2019 ga-eru.
Ndị bịara nke Mobile World Congress 2021 na Barcelona ga-anwale ule na-adịghị mma maka COVID-19, dị mkpa iji gaa ngosi nke ga-adịgide ụbọchị atọ. John Hoffman, onye isi oche nke GSMA, na-atụ anya ka ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi ga-eto ma nwee ike nweta ya n'ọtụtụ pacenti n'ime ọnwa ndị na-abịanụ.
A ga-eme ule ndị a na Fira de Barcelona na mpaghara ndị ewepụtara, a ga-eme nyocha ngwa ngwa iji mata nsonaazụ ya naanị na 15 nkeji. Nke a ga - enwe nnukwu mbubata, Yabụ, mpaghara ga-enyere ọtụtụ puku ule aka.
Ihe omume na ọkara ikike
N'ime ndị bịara 110.000 ahụ, a na-atụ anya na ike ga-abụ ọkara, ihe dị ka ndị bịara 50.000-55.000 nwere ike ịbụ ọnụọgụ nke ihe ngosi dị mkpa maka obodo Barcelona. The Mobile World Congress 2021 bụ otu n'ime atụmanya kachasị atụ anya, ọkachasị ka anyị na-amata ngwaọrụ ndị na-esote nke ndị ọkpọ teknụzụ mkpanaka.
Inweta ọkara nke ndị bịaranụ site na afọ ndị gara aga ga-abụ ndekọ nke ndị bịara maka oge ugbu a, Hoffman n'onwe ya kwuru banyere ya: «Barcelona ga-adịtụ iche. Ihe ndị achọrọ megide Covid ga-ebelata ikike anyị. Anyị agaghị enwe mmadụ 110.000.
A na-atụ anya ihe omume nwere nnukwu ụdị
N'oge a onweghi nnukwu n'ime ndị kwuru maka mbịara ha na Mobile World Congress 2021 na Barcelona, ​​a ka nwere ihe dịka ọnwa anọ iji kpebie ma ha ga-anọ ebe ahụ ma ọ bụ na ha agaghị. Ọtụtụ n'ime ha kagburu enyemaka afọ gara aga mgbe ha matachara ogo nke COVID-19.
Ọ bụ ihe dị mkpa iji nwee ike ịkpọsa ngwaọrụ ọhụrụ ya na teknụzụ nke ga-adị n'ime otu afọ nke a na-atụ anya mmelite megide ọrịa na-efe efe n'ihi ịgba ọgwụ mgbochi ụwa. Dị dịka Xiaomi, Samsung, Sony, Huawei na ọtụtụ ndị ọzọ nwere oge zuru oke iji gosi ekwentị ha ọzọ, smartwatches na ọtụtụ ngwaahịa ndị ga-abata na 2021 na ngosipụta MWC.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » The Mobile World Congress 2021 na Barcelona ga-abụ oge ọkọchị a ma nwee enyemaka ihu na ihu
PUBG: Ekwuputala Ọchịchị Ọhụrụ, Sequel to Popular PUBG Mobile Coming This Year